VOA: Gaaffiif deebii Obbo Daniel Dissasaa, ABO/OLF - Ayyaantuu News
VOA: Gaaffiif deebii Obbo Daniel Dissasaa, ABO/OLF 6 comments - What do you think? Posted by admin - 01/03/2012 at 7:13 pm Categories:
6 Responses to “VOA: Gaaffiif deebii Obbo Daniel Dissasaa, ABO/OLF”
Boonaa says:	03/03/2012 at 4:29 am	Ergaan obbo Daan’eel dabarsaan baay’ee kan namatti tolu. Miidiyaan oromoos ta’e kanhabashaa QC OLF tiif haga ammaa sirriitti waltajjii utuu hinkenniifiin turuun isaanii kan nama gaddisisu dha. haata’u malee bilisummaa oromoof gartuuwwan OLF hunda caalaa “determination” fi “self confidence” kan qaban garee kana. Kana booda gareen Shanee garee QC wajjin hojjechuuf qopha’uu qaba. Gareen Kamal ABO dhugaa waan hintaaneef wajjin hojjechuun hindandaa’amu. Ergaa obbo daan’eel keessa kan natti tole har’a illee xiinsammuun oromota tokko tokkoo hinfayyine; “oromoon qophaa isaa qabsaa’uu hindanda’u yoo habashaa wajjin hidhate malee” jedhanii kan amanan ilaalcha gabraa kan qaban jiru isa jedhu dha. Kuni dhugaa dha. Konfideensiin nu keessatti uumamuu qaba. Habashaa irraa gargaarsa nu hinbarbaachisu. Cunqurfamtoota warra akka Afar somaalee sidaamaa waliin taanee gabrummaa fonqolchuu dandeenya.
obsaa says:	03/03/2012 at 4:44 am	Hello Obbo Dan’eel:
Yoo dandaa’ame shanee wajjin tokko ta’aa. Karoorri isin qabattanii jirtan baay’ee gaariidha.
mekamu mulata says:	10/07/2013 at 2:35 pm	yaadi obbo dani’el jedhan garridha garuu kanan durasi abaashaa wajjin qabsoofnee turee garuu hin milkoofnee amamoo sumalee afaarri kan kana fakkatanii wajjii yoo qabsoonee gaarriidha !
gamada oromo says:	20/08/2013 at 8:18 am	yanni obbo daniel disasa baay’e namatti tola sila hojitti nu jijirame baay’e gaaridha gatadaan gadaa bilisumma nuf hata’u
Abdiisaa says:	24/10/2013 at 1:53 pm	Baay’ee namati tola waa hundaa caala kun gaaridha jechuuf immoo dursa hojiti yaa hikatu
Ifa Tola says:	07/11/2013 at 10:53 pm	tokko tahaa,ilaalcha kessan kayyo tokko qofaan olcha.kutaan waali hin qodinaa.